जाडो | Diyopost
पेरिसडाँडा बैठक : पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी छुट्टाछुट्टै भएर जाने निर्णय
काठमाडौं, २४ फागुन । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहको स्थायी समितिको बैठकले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको छ । आज पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको…
*धादिङका सञ्चारकर्मी धमेन्द्र श्रेष्ठद्वारा आत्महत्या !
प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलको प्रश्न: ‘तपाईको पार्टी कुन हो ?’
काठमाडौं, फागुन २३ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेसँगै सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको…
जबरजस्ती अध्यादेश ल्याएको भन्दै संसदमा कांग्रेस र राजपाको नाराबाजी
प्रचण्ड भन्छन् : ‘सर्वोच्चको फैसला अपेक्षाविपरित आयो’
काठमाडौँ, फागुन २३ । प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट आफुले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरित फैसला आएको बताएका छन् । ‘नेकपा’ नामको विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी…
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–माधव समूह आकस्मिक छलफलमा
काठमाडौँ, २३ फागुन ।नेपाल कम्युनिष्ट्र पाट्री ‘नेकपा’ नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूह आकस्मिक छलफलमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा ९माओवादी…
काठमाडौं, २४ फागुन । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहको स्थायी समितिको बैठकले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको छ । आज पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालनले नेकपा…
जनताको खेदाईमा परेका ओली सरकारका दुई मन्त्रीलाई जग्गा दलालले पुर्‍याएका थिए मोतिपुर !
गृहमन्त्री बादललाई भेटेपछि विप्लव नख्खु कारागारमा : हेमन्त प्रकाशसहित छलफलमा !
साबिक एमाले र माओवादी ब्युँतियो, नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको